‘मोनिका ! आर यु अलाईभ ?’  OnlineKhabar
‘मोनिका ! आर यु अलाईभ ?’
बालाजु पुगेर खल्ती छाम्दा थाहा पाएँ, त्यो दिन म घरबाट मोबाइल नलिई निस्केको रहेछु । मोबाइल लिनैका लागि मात्र र्फकने जाँगर चलेन । दोमनलाई एक मन बनाउँदै सोचें, के नै इमरजेन्सी पर्ला र ?
(लेखक एवम पत्रकार अशोक सिलवाल लाङटाङ सद्भावना दूत पनि हुन् । उनी पछिल्लो समय टुर गाइडका रुपमा सक्रिय छन् ।)
२०७४ भदौ २५ गते १२:२९ मा प्रकाशित